सलमानले बिग बोस छोड्ने ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
सलमानले बिग बोस छोड्ने ?
२४ पुष,२०७३ | Agency
बलिउड सुपरस्टार सलमान खान बिग बोस छोड्ने मनसायमा पुगेको खबर छ । बिग बोसका कारण आफ्नो छवि खराब भएको भन्दै उनले बिग बोस छोड्न सक्ने संकेत देखिएको छ । बिग बोस सलमानको जीवन र करिअरको महत्वपूर्ण काम हो जुन उनको मनसँग जोडिएको छ ।
तर अहिले आएर भने उनलाई बिग बोसका कारण आफ्नो छवि बिग्रेको महसुस भईरहेको छ । यहि कारण अब उनी आफूलाई बिग बोसबाट अलग गर्न चाहन्छन् ।
सलमान बिग बोसको चौथो सिजनबाट लगातार होस्ट गरिरहेका छन् । पाँचौँ सिजनमा भने संजय दत्त र सलमान मिलेर बिग बोस होस्ट गरेका थिए । त्यसपछिका एपिशोडहरुमा भने सलमानमात्रै देखिएका छन् । बिगत केही बर्षयता उनले शो छाड्ने खबरहरु आईरहेका छन् । बिग बोसको सिजन ८ मा त सलमानले बीचमै छाडेपनि तर दर्शकको चाहना अनुसार फेरि उनी फर्किए । उनले छाडेको समयमा बिग बोसलाई फराहा खानले होस्ट गरेकी थिईन् । बिग बोसको दशौँ सिजनमा सलमानले प्रतिएपिशोड आठ करोड भारु लिईरहेका छन् । उनी हप्तामा दुई दिन, शनिबार र आईतबार मात्रै आउँछन् ।
सलमान खानको मुडी बानी सबैलाई थाहा छ । कतिबेला के गर्छन् भन्ने कुरा स्वयम सलमानलाई नै थाहा हुँदैन । सलमानको यस्तै अन्दाज हालै मात्र भएको..
‘रेस ३’ मा फाईनल भए सलमान तर अघि सारे यस्तो शर्त
सलमानले भाडाबाटै महिनामा ८० लाख कमाउने
फिल्म डुबेपछि पैसा माग्न सलमानको घर पुगे वितरक
अझै सुध्रेको छ्रैन सम्बन्ध
टि भि की नागिन सलमानका ज्वाँईसँग !